Lehilahy Ogandey Nosamborina Noho Fiakanjoana T-Shirt Manasongadina Mpitarika Ny Fanoherana · Global Voices teny Malagasy
Lehilahy Ogandey Nosamborina Noho Fiakanjoana T-Shirt Manasongadina Mpitarika Ny Fanoherana
Voadika ny 06 Jona 2016 10:23 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Swahili, Français, Español, English
Dikasarin'ny paositra Facebook-n'i Samson Tusiime.
Nihaohaon'ny tenirohy #FreeSamwyiri indray ny Twitter tao Oganda tamin'ny Alahady 29 Mey. Izao fanentanana Twitter izao no nanaraka ny fisamborana ilay lehilahy Ogandey antsoina hoe Samson Tusiime izay voalaza fa noho ny fiakanjoana sy fizarana T-shirts mampivandravandra ny sarin'ny mpitarika ny fanoherana Ogandey Kizza Besigye.
Nilaza ny Polisy fa nanomana fihetsiketsehana “tsy ara-dalàna” izy ary niomana hizara T-shirts manerana ny firenena. Araka ny nolazain'ny gazety iray mahaleotena ao Oganda, dia nisy Ogandey roa hafa, Ismail Muyinda sy Asia Nanyanzi, ihany koa nosamborina.
Namoaka hafatra tao amin'ny Facebook i Tusiime tamin'ny 28 Mey nitafy ilay T-shirt voalaza, nilaza fa mikaroka ny namany Ysmyl Muyinda (izay heverina fa mitovy amin'i Ismail Muyinda voatatitra etsy ambony ho nosamborina), izay namokatra sy nanonta pirinty azy ireny ny orinasany. Nanoratra izy fa nitety ny tobin'ny polisy nitady ny namany. Rehefa tsikaritry ny namany fa nanjavona ihany koa i Tusiime, dia nanomboka ny tenirohy #FreeSamwyiri izy ireo. Nanamafy ny polisy avy eo fa voasambotra tokoa izy.
Nampihotakotaka ny Ogandey maro, izay tohina tamin'ny fahafantarana fa T-shirt dia mety isamborana olona, ity raharaha ity. Nanontany ny polisy i Joel Nevender, Ogandey iray bilaogera:
Nisambotra an'i @Samwyri ianareo noho ny fampiharany ny fahalalaham-pitenenany? noho ny t-shirt?
Raha nisioka i Ogutu Daudi:
Afa-mivoaka ve izahay ary hitsahatra amin'ny fitenenana azy ity ho demaokrasia satria tsy izany no izy. Mametraha anay ao anaty akanjo tohitenany mavo nahoaka no tsy ianao
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izany dia tsy nahazaka tsikera mihitsy ny manampahefana ogandey. Nandresy tao anatin'ny fifidianana mampiady hevitra hidirana amin'ny fehim-potoam-piasana fahadimy ny filoha Yoweri Museveni tamin'ny Febroary 2016, fifidianana nolazain'ny mpanohitra ho feno hosoka. Nanatontosa fihetsiketsehana mitohy lazain'izy ireo ho “fanentanam-pihatsiana” [mg] mihaika ny fandresen'i Museveni ny mpikambana ao amin'ny fenoherana sy ireo mpikatroka hafa.
Hatramin'ny fifidianana tamin'ny Febroary, dia nosamborin'ny manampahefana imbetsaka ry Kizza Besigye sy ireo olo-malaza hafa ao amin'ny fanoherana ary indroa nobahanana [mg] ihany koa ny media sosialy ho fitandroana ny “fiarovam-pirenena” [en].
Taorian'ny fisamborana an'i Tusiime, nanontany tena i Josephine Karungi:
Sarotra tokoa ny manodina ny zavatra sasantsasany… ankehitriny izahay nisambotra azy satria nahoana… tsy afa-miteny ianao fa noho ilay t-shirt tokoa sa afaka?
Patoraking, mpianatry ny oniversity, nierirteritra fa ratsy kokoa noho ny tamin'ny andron'i Idi Amin, ilay Ogandey mpanao didijadona nifehy an'i Oganda nanomboka ny taona 1971 ka hatramin'ny taona 1979 izao fihetsika izao:
Tsy afa-miteny intsony ny ray amandrenintsika hoe “tamin'ny fotoanan'i Amin,…” satria mbola ratsy kokoa noho ny tamin'ny andron'i Amin izao fotoana izao.
Chapter Four Uganda, fikambanana iray mpanao fanampiana, namaly ny hiaka tamin'ny alalan'ny fandefasana ireo mpisolovavan'izy ireo tany amin'ny tobin'ny polisy:
Ao amin'ny SIU Kireka ny mpiandraikitra ato aminay hahazoana fanambarana avy amin'ny @Samwyri hamantarana ny hetsika ara-pitsarana hatao
Ny dikan'ny SIU Kireka dia Special Investigation Unit [Vondrona Mpanao Fanadihadiana Manokana] ao Kireka, Kampala renivohitra.
Mbola tsy fantatra loatra hoe inona tokoa ny vesatra iampangana azy. Na izany aza nanombana i Qatahar Raymond, Ogandey iray mpanao gazety, izay nanaraka azy hatramin'ny nisamborana an'i Tusiime, fa mety ho fandrisihana hanao herisetra no hiampangana azy.
Nahare izahay fa mety ho ‘fandrisihana hanao herisetra’ no iampangana an'i @Samwyri sy ny namany raha ho ampangaina ry zareo.